Jahawareerka Siyaasadda Soomaaliya – Kalfadhi
Kadib burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya 1991 waxaa dalka uu galay dagaal sokeeya Ivo kala qob qob ku dhisan qabaailo iska horjeeda .
Sanadka 2000 ayaa dadaal uu horseed ka ahaa Madaxweyne Cismaaciil Cumar Geelle ,Madaxweynaha dalka Djibouti waxa markii ugu horeysay Soomaaliya ay yeelatay Dowlad KMG ah .
Dowladdaas oo Madaxweyne ka ahaa C/qaasim Salaad Xasan oo aan najaxin waxii ka danbeeyay waxaa xigay dowlado KMG ah iyo kuwa aan aheyn waxaana dalka soo maray 4 dowladooda oo ay madaxweynayaal ka kala ahaayeen
C/laahi Yusuf Axmed
iyo Madaxweynaha xilligan Maxamed C. Farrmaajo
Dowladahaasi oo idil midbo waxaa xoogaa horumar ah ayay ku soo kordhisay dalka laakiin waxa ay dhamaantood ku guul dareysteen in ay dhidbaan hey’adihii tiir dhexaadka u noqon lahaa dib u dhisadda dowladnimad
Soomaaliya tusaale ahaan ilaa xilligan Soomaaliya malaha dastuur dhameystiran oo helay aftida dadweynaha Soomaaliyeed.
Maxkmad Dastuuri ah dalka kama jirto ,maqaamka caasimadda Muqdisho baarlamaanku qaraar rasmi ah kama soo saarin weli . Dowlad waliba waxyaabaha ay u xilsaarneyd in dalka ay u horseeddo doorasho qof iyo cod ah mana jiraan wax ka hirgalay ilaa maanta .
Xaaladda dalku waa sidee iminka?
Waxaa soo dhow dhamaadkii hey’adaha dastuuriga ee dalka walina lama hayo nooc doorasho ee leysku waafaqsan yahay Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah .
Madaxweyne Farmaajo waxa uu ku adkeysanayaa in dalka uu aadayo doorasho qof iyo cod ah laakiin dowladdu bilowgiiba ma qaban aasaasiyaadkii doorasho lagu aadi lahaa sida sameynta tirakoob ,diiwaan galinta cod bixiyayaasha ,meeleynta kuraasta iyo xadeynta degmooyinka IWM ,marka waxa xaqiiqdii kaliya ay u muuqataa af goobaadsi uu ku doonayo muddo kororso uu ka xalaaleeysto baarlamaanka oo iyaga laftooda raba in labo sano oo muddo kororsi indhosarcaad ah in ay sameystaan.
Dowlad Goboleedyada dhankooda waxa ka muuqata colaad hoose oo qaarkood ay u qabaan madaxda Dowladda Federaalka cuqdada hoose awgood , waxaa hortooda ka muuqata ka guul gaaridda fursad ay kaga aargoostaan hogaanka hadda jira ,cimiri deg degna ay ku ridaan si ay markaa ugu suuragasho in ay gacan weyn ku yeesheen baarlamaanka cusub ee iman doono iyo dowladda tan xigta iyo dad badan in ay daadka raacsiiyaan ,balse waxa ay heystaan marmarsiiyo aan meelna loo dhaafi karin. oo ah dowladdan waqtigii ay mandate-ka mu laheyd wou dhamaaday ee hala tashto waxa xiga ,tiiyoo tooda ay meel u taal balse ka dhigaya danta shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo oo maanka ku hayo halka la kala joogo ayaa baarlamaanka ku madlay in ay yihiin hey’adda kaliya ee dalka sharci ahaan matasha sidaa awgeedna waxii Dhuusamareeb ka soo baxa uu ula soo laaban doono baarlamaanka ,waliba si bareer ah ka hor shirka Dhuusamareeb 3. oo markan doorashada diiradda lagu saari doono .
Xalalka suuragalka ah
Sida muuqata doorasho qof iyo cod ah iskaba daa mid dadban xitaa waxa ay u baahan tahay muwaafaqo ,jiheyn iyo waqti ,sidaa awgeed xalku wuxuu ku jiraa tunasulaad iyo hishiis laga gaaro oo laga fekero maxaa suuragal ah marka ay halkan taagan tahay . Wax kasta oo hishiis lagu yahay adduunku waxa uu ku qasban yahay inuu aqbalo ,hase ahaatee shardigu waa wada ogol.
Hadii caqligu shaqeyn waayo oo qof walba riyadiisa gaarka ah ay u muuqato dalka waxa uu galayaa jahawareer siyaaseed.
Gurmadka beesha caalamka waxa uu noqonayaa lagama maarmaan ,qab isku yeelkeenunu qiima ma yeelanayo sababtoo ah hadii aad tashan weyso waa laguu talin. Waa road map hala jeexo ,hala dhiso xukuumad dhinacyada oo dhan ay qeyb ka yihiin oo dalka doorasho ku sameysa waqti mucayin oo la isla ogol yahay IWM.
WQ: Maxamed Ibrahim Macalimuu